पहिलो पटक पूर्ण आकारको संघीय बजेट : महत्त्वाकांक्षी राजस्व असुली लक्ष्य — Newskoseli
पहिलो पटक पूर्ण आकारको संघीय बजेट : महत्त्वाकांक्षी राजस्व असुली लक्ष्य
मुलुक संघीयतामा गएको ३ वर्षपछि सरकारले राजस्व असुलीको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर पहिलो पटक पूर्ण आकारको संघीय बजेट ल्याउँदैछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आय–व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दैछन् ।
संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भिन्दाभिन्दै मितिमा बजेट ल्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार जेठ १५ मा केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने असार १ मा सातै प्रदेशले बजेट ल्याउनु पर्नेछ । सबै स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट ल्याउनेछन् ।
तीनै निकायले सार्वजनिक गरेको बजेट सधैंजस्तो साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भने केन्द्रीय बजेटमा राखिने छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्व असुलीमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन् । केही वर्षदेखि राजस्व असुली वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारीमा छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ३० प्रतिशत हाराहारीको लक्ष्य राखेको अर्थका अधिकारीले बताएको खबर मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।